स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजनक क्वाँटी ? – Nepal Views
स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजनक क्वाँटी ?
काठमाडौं । आज जनैपूर्णिमा अर्थात क्वाँटी खाने दिन । आज क्वाँटी खाने दिन मात्र नभएर क्वाँटी खाएरै स्वस्थ्य हुने दिन पनि हो । परापूर्वकालदेखि नै जनैपूर्णिमाका दिन क्वाँटी खाने प्रचलन छ ।
’क्वाँटि’ शब्द नेपालभाषाको ’क्वाति’ शब्दबाट बनेको हो, जस अनुसार ’क्वा’ को अर्थ तातो र ’ति’ को अर्थ झोल वा सुप अर्थ लाग्ने भएकोले ’क्वाति’ वा ’क्वाँटी’को अर्थ तातो सुप भन्ने बुझिन्छ । जनै पुर्णिमाको समयमा अधिकांसको घरमा गेडागुडीको परिकार क्वाँटी खाने चलन छ ।
क्वाँटीमा नौ थरीका गेडागुडीहरु चना, मस्याङ, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठूलो सिमी, ठूलो केराउ, सानो केराउ मिसाएर खाने चलन छ । यस्ता गेडागुडीको मिश्रण खानु अघि यसलाई टुसा उम्रने गरी पानीमा भिजाउने चलन छ ।
टुसा उम्रेका गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ । टुसा उमारेको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई जीवन्त खानेकुरा भनिन्छ । महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्वाँटी जनैपूर्णिमा पर्वको विशेष आहारका रूपमा पनि रहँदै आएको छ ।
परम्परागत रूपमा यसले जाडो मौसम सुरु भएको सन्देश पनि दिन्छ । जाडोका बेला टुसा उमारेको खानेकुराले मानव स्वास्थ्यमा एकदमै फाइदा गर्छ भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खालाई जानकारी थियो । उनीहरूको परम्परागत ज्ञानले स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउने थाहा भएरै क्वाँटी खाने प्रचलन अविच्छिन्न रहिआएको मानिन्छ । त्यसैको निरन्तरताका लागि यसलाई सांस्कृतिक रूप दिइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्यका लागि क्वाँटी कति फाइदाजनक ?
टुसा उमारेको क्वाँटी प्रोटिनको खानी हो । किनभने, यसमा थुप्रै किसिमका गेडागुडी मिसाइएका हुन्छन् । टुसा उम्रेपछि क्वाँटीमा भएका तत्त्वहरू प्रोटिन, सूक्ष्म पोषकतत्त्व, क्याल्सियम, भिटामिन १० गुणा बढ्न जान्छन् । त्यसैले सय रूपैयाँको सुक्खा क्वाँटी ल्याएर टुसा उमारेर खाने हो भने ४ सय रूपैयाँसम्मको फाइदा लिन सकिने बताउँछिन् जनस्वास्थ्यविद्ध डा.अरुणा उप्रेती ।
डा. उप्रेतीका अनुसार क्वाँटी जीवन्त खाना हो । यसलाई पचाउन पनि निकै सजिलो हुन्छ । दाल, गेडागुडीको सेवन गर्दा शरीरमा ग्यास उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर, क्वाँटी बनाएर खाएपछि शरीरमा ग्यास बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ ।
बालबालिकालाई कुपोषण तथा गर्भवती महिलाको शरीरमा प्रोटिनको कमी नहोस् भनेर क्वाँटी खान दिने गरिन्छ । प्रोटिनको कमी नभएपछि महिलालाई रक्तअल्पता पनि हुन पाउँदैन । गर्भवतीमा रगतको कमी नभएपछि भ्रुण वा पेटको बच्चा पनि राम्रो हुन्छ । गर्भवतीमा मात्र नभएर सुत्केरी भएपछि पनि क्वाँटीको सेवनले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ । यसको सेवनले महिलाको दूध राम्रोसँग आउने हुँदा बच्चालाई पर्याप्त मात्रामा दूध प्राप्त हुन्छ ।
क्वाँटीको रस खाँदा पर्याप्त मात्रामा शरीरमा चाहिने क्याल्सियम, प्रोटिन प्राप्त हुन्छ, जसले आमाको दूध पनि बढाउने गर्छ । त्यसकारण सुत्केरी महिलालाई ज्वानो तथा क्वाँटीको रस खुवाउने हाम्रो जुन परम्परागत छ, त्यो एकदमै वैज्ञानिक भएको डा. उप्रेती बताउँछिन् ।
कोही व्यक्ति कुनै रोग तथा शरीरमा समस्यापछि तंग्रिन लागेका बेला पनि क्वाँटीको रसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ । जो व्यक्ति शाहाकारी जीवनशैली अपनाउँछन्, माछा-मासु खाँदैनन्, उनीहरूका लागि क्वाँटी अति उपयोगी हुन्छ । त्यस्तै क्वाँटीले प्रोटिन तथा अन्य पोषकतत्त्व पनि भरपूर प्रदान गर्ने डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।
क्वाँटीलाई विभिन्न तरिकाले पकाएर खान सकिन्छ । सुप बनाएर वा तरकारीका रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । क्वाँटीलाई पिसेर मकै पिठोमा मिलाएर बालबालिकाका लागि खाजा तयार गर्दा यसको पौष्टिकता एकदमै बढ्न जान्छ । किनभने, मकैमा भएको कार्बोहाइड्रेड, क्वाँटीमा भएका विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषकतत्त्व मिलेपछि असाध्यै राम्रो खाद्यवस्तु बन्छ ।
क्वाँटी खानुका अन्य फाइदा
क्वाँटी शक्तिवर्धक एवं पौष्टिक आहार हो । यसमा भिटामिन ‘बी’को सबैजसो प्रकार पाइन्छ ।
क्वाँटी खाँदा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।
यसको सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
कब्जियतको र पायल्स भएकालाई फाइदाजनक मानिन्छ ।
हाम्रो संस्कृतिमा क्वाँटीको रस खाने विशेष दिनत त छ नै, अन्य बेलामा पनि क्वाँटीको रस खाँदा शरीर स्वस्थ रहन्छ । टुसा उमारेको चना बालबालिकालाई खुवाइयो भने प्रोटिनको मात्र पर्याप्त हुन्छ । टुसा उमारेको कुनै पनि गेडागुडी जस्तो चना, मटर, केराउ, बोडी, बकुला, मेथी मात्र होइन कि आलस, तिल, बदाम पनि टुसा उमारेर खान सकिन्छ ।
६ भदौ २०७८ १२:४९
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे हरियोखर्क अस्पताल अनुगमन
चौधरी फाउण्डेशनले कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा थपिदियो ११ बेड
उच्च रक्तचापका ७५ प्रतिशत बिरामी उपचार बाहिर
निर्वाचनको दिन आकस्मिक सेवा नरोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदा बढ्यो कोरोनाको जोखिम
२१ जना थपिए कोरोना संक्रमित, २४ जिल्ला संक्रमणमुक्त
हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको मातहतबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश